Madxaweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan Oo Shaaciyay In Turkiga Aanu Damac Kaga Jirin Taako Ka Mid Ah Dhulka Suuriya - Borama News Network
Madxaweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan Oo Shaaciyay In Turkiga Aanu Damac Kaga Jirin Taako Ka Mid Ah Dhulka Suuriya
Madxaweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa beeniyay in damac dhul uu ku hoos jiro howlagallada milatari ee ka socda Suuriya, isagoo eedeyntaasi ku tilmaamay inay “aflagaaddo” ku tahay isaga.
Isagoo maanta ka hadlayay shir, ayuu Erdogan ku eedeeyay xulafada Ankara inaysan ku taageerin waxa uu ugu yeeray dagaalka ka dhanka ah “argagixisada”.
“Turkiga isha kuma hayo dhulka dal kale … Waxaan eedeynta noocaas ah u aragnaa aflagaaddada ugu daran ee naloo geystay,” ayuu ka yiri Istanbul.
Ankara ayaa kooxda Kurdiyiinta ee YPG u aragta argagixiso taageerta Xisbiga Shaqaalaha Kurdiyiinta ee PKK ee dalkaasi laga mamnuucay, kuwaasoo kacdon ka waday gudaha Turkiga tan iyo sanadkii 1984.
Xukuumadda Ankara, Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa xisbiga PKK ku daray liiska madow.
Howlgalka milatari ee Ankara ee ka dhanka ah xoogagga Kurdiyiinta oo door weyn ka qaatay dagaalka ka dhanka ah Daacishta Ciraaq ayaa sababay cambaareyn ka timid caalamka iyo in qaar ka mid ah dalalka NATO ay joojiyaan iibka hubka.
Xoghayaha Guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa walaac weyn ka muujiyay howlgalka milatari ee bilowday 9-kii bishan, kaasoo Kurdiyiinta Suuriya looga fogeynayo xadka Turkiga uu la wadaago Suuriya.
Madaxweyne Erdogan ayaa si caro leh uga jawaabay cambaareynta Reer-galbeedka ee ku aaddan howlgalka Turkiga ee waqooyi-bari Suuriya.
“Dhammaantood Ree-galbeedka, waxay la safteen argagixisada wayna na weerareen – waxaa ku jira NATO iyo dalalka Midowga Yurub,” ayuu yiri.
“Waxaan u maleynayay inaad ka soo horjeeddaan argagixisannimada iyo argagixisada. Maxaa dhacay? Goormaad bilowdeen inaad la safataan argagixisada?”
Kooxaha Kurdiyiinta Suuriya ayaa xulafo weyn la ahaa Mareykanka iyagoo kala qeyb qaatay dagaalka ka dhanka ah ISIL.
Toddobaadkii la soo dhaafay, Turkiga ayaa ku dhawaaqay 120-saacadood oo uu joojinayo holwgalka kaddib heshiis uu la galay Madaxweyne Ku xigeenka Mareykanka Mike Pence, heshiiskaasoo sidoo kale dagaalyahannada Kurdiyiinta loogu oggolaanayo inay dib u gurtaan si goob amaan ah looga sameeyo xadka Turkiga.
Erdogan ayaa lagu wadaa inuu berri kulan la qaato madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
Deg Deg: Wasiirka Amniga Dawlada Fadaraalka Somaliya Oo Dhabarka U Ritay Masuuliyada Dilkii Taliyahii Ciidamada Gorgor
Yuusuf Garaad Oo Jawaab Cajiib Ah Uga Jawaabay Eedaymo Ugu Yimid Wariye Aamina Muuse Weheliye
Madaxwaynaha Dalka Maraykanka Donald Trump Oo Amray In Turkiga Laga Qaado Cunaqabtayntii Uu Horay U Saaray
Bnnstaff October 24, 2019
Isbitaaly ka Degmada Bardaale Oo Xidhmay Iyo Sobobaha Keenay Xidhinaashiyaha Oo La Shaaciyay
Bnnstaff November 10, 2019
Hawlgalo Dad Lagu Soo Qabqabtay Oo Laga Sameeyay Degmad Afgooye Ee Gobolka Shabeelaha Hoose
Bnnstaff November 7, 2019
Deg Deg: Xisbiyada Mucaaridka Ah Oo Qaadacay Koomishanka Cusub...
Bnnstaff November 12, 2019
“Sharcigu Ma Dhigayo ansixinta 6 Xubnoob” Xildhaan Qabile
Mustafehaji November 12, 2019
Aaladan Casriga ahi Ma Buuxin Kartaa Booskii Ay Ka...
Xubinta Kasoo Hadhay Komishankii Hore Oo Ka Dareen Celisay...
Siyaasi Talaabo Oo Si Adag Uga Hadlay Jabhada Cawaale...
DAAWO Muuqaal DHAMAYSTIRAN Siday U Dhacday Ansixinta Xubnsha Komishanka
Deg Deg Baarlqmaanka Somaliland Oo Cod Aqlabiyad Leh Ku...
Bnnstaff November 12, 2019 November 12, 2019
DEG DEG:- Xaalada Golaha Wakiilada Somaliland Oo Kacsan Iyo...
Beesha Caalamka Oo Shuruudi Adag Hordhigtay Madaxwayne Axmed Madoobe